Trump iyo Biden Oo Yeeshay Dooddii Ugu Kululayd | Gaaroodi News
Trump iyo Biden Oo Yeeshay Dooddii Ugu Kululayd
Qoraalka Muuqaalka,Biden: ‘Do you believe for a moment what he’s telling you?’
Doodda labada musharrax dhexmartay oo mararka qaar aflagaaddo iyo hadalla kulul ay isku dhaafsanayeen Mr Biden oo 77 jir ah, Mr Trump oo 74 jir ah wuxuu ku eedeeyey inuu cambaareyn cunsuriyadda dadka caddaanka ee aaminsan sarreynta midabka cadaanka isaga oo ugu yeeray “Eyga Putin”..
Labad musharrax marki ay ka doodayeen daryeelka caafimaadka, Mr Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga xubinka la loollamaya wuxuu ku eedeeyey inuu xisbigiisa u horseedayo inuu noqdo xisbi hantiwadaag isagoo leh: “Waa ku xukumi doonaan adiga, Joe, taas waad ogtahay.”
“Wakhti xaadirkan waxaan ka mid ahay Xisbiga Dimuqraadiga,” ayuu Mr Biden ugu jawaabay.
Mr Biden oo hadalka qaatay wuxuu yiri: “Heshiisku wuxuu yahay: wax kasta oo uu hadda ka hor idiin sheegay waa been.”
“Aniga halkan uma joogo inaan beentiisa xasuusto. Cid weliba wey ogtahay inuu beenloow yahay.”
Mr Trump oo u jawaabay Biden wuxuu yiri: “Joe, waxaad tahay beenloow.”
“Dad badan ayaa dhintay dad badanna geeri ayey qarka u saaran yihiin hadii aan la qaadin tallaabboyin degdeg ah oo waxtar leh,” ayuu yiri Mr Biden.
Mr Biden ayaa sheegay: “Kani waa madaxweyne marweliba adeegsado ficillo abuuro neceyb cunsuriyad iyo kala qaybsanaan bulsho oo cunsiriyad ku saleysan”
Mr Trump wuxuu yiri: “Kuma dhawaaqi kartid ereyga ‘hirgelinta sarreynta sharciga’ sababta oo ah haddii aad ereyadaasi adeegsatid waxaad waayeysaa dhammaan taageerayaasha siyaasaddooda bidixda tahay.
“Waa hubaal, ayuu madaxweynaha. “Waxaanna rabaa inaan sidaa sameeyo.”
“Sidaa samee mudane,” ayuu yiri xiriiriyaha barnaamijka.
Dooddi ugu kululeed ee carada wadatay waxay labada musharrax dhexmaray marki la soo hadal qaaday arrima la xidhiidha qoysaskooda
Balse Mr Biden eeddaasi dhinac ayuu isaga dhigay. Xiriiriyaha dooda labada musharrax wariyaha FOX NEWS Chiris Wallace
Xiriiriyaha Fox News wuxuu yiri: ” “Waxaan u maleynayaa in dadweynaha si fiican looga adeegi lahaa haddii ay labada musharraxba ay ku wada hadlaan si aan faragelin badan laheen oo ismaqal ku dheehan. Waxaan kaa codsanayaa mudane, inaad saa sameyso.”
Mr Trump ayaa ku jawaabay: “Waayahay, isaguna sidaa ha sameeyo.”
Doodda labada musharrax ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka dhex martay xalay ayaa ahayd tii ugu adkeyd iyada oo ay dorashada madaxweynanimada ee bisha November dhaceyso ay ka harsan yihiin 35 maalmood oo keli ah